Turkiga ayaa cambaareeyay weerar ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho kaas oo ku dhaawacmey tiro rayid ah. "Waxaan dhalleeceeynaynaa weerarkii argagixiso ee lala beegsaday dad rayid ah oo aan waxba galabsan oo ku dhaawacmay 11 qof oo rayid ah, oo ay ku jiraan afar muwaaddiniin Turki ah," ayay Wasaaradda Difaaca...
Badeecooyinka Ka Yimaada Dalka Faransiiska oo Looga Digay Dadka Turkigu In ay Iibsadaan.
Iyadoo uu sii xumaanayo xiriirka Dowladdaha Turkiga iyo Faransiiska ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaa uu dadkiisa ku booriyay in aysan iibsan baddeecadaha lagu sameeyo dalka Faransiiska. Fariin teleefishinka uu u mariyay shacabkiisa ayuu ku sheegay madaxweyne Erdogan dadkiisa in aysan iibsan Alaabaha lagu sameeyo dalka Faransiiska, isaga...
Maxkamadda Caalamiga ee Caddaaladda, ICJ ayaa dooratay Madaxweyne cusub oo lagu magacaabao Joan Donoghue oo kasoo keeda waddanka Maraykanka. Madaxweynaha cusub ee ICJ ayaa badalaya Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo Soomaaliya kasoo jeeda ka dib markii waqtigiisii saddexda sano ahaa uu dhammaaday 8-dii Febaraayo 2021.Garsoore Kirill Gevorgian oo kasoo jeeda dalka...
Bilow Keeroow oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan magaalada Mandera dareemeyn saameynta dagaalkii Isniintii shalay ka dhacay degmada Beled-Xaawo. Isaga oo la hadlayay Laanta Afka Soomaaliga ee BBC da ayuu sheegay in labada magaalo yihiin kuwo daris ah oo mar walba...
Raiisul wasaaraha dalka Pakistaan Imran Khan ayaa sheegay cadaadiska diimeed ee lagu hayo muslimiinta adduunka oo dhan uu yahay kii ugu xumaa taariikhda aadanaha. Raysal Wasaaruhu waxaa uu ku baaqay in muslimiintu aysan indhaha ka eegan waxa ka dhacaya Mayamar iyo Kashmir oo diintooda darteed loo cadaadinayo. "Ma doonayno in Ummada...
Dalka South Africa Magaalada Ceptown Dukaano Ku Yaal oo La Boobay
Wararka laga helayo xaafadda Delf ee magaalada Ceptown ayaa waxay sheegayaan in deegaankaasi uu ka bilowday boob, kadib markii dad caresan ay luga mariyeen illaa iyo Afar dukaan oo ay leeyihiin dad u dhashay waddanka Bangladesh, sida goobjoogayaal ay u sheegeen Warbaahinta. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in dad badan...
R/wasaare Cusub oo uu Yeeshay Dalka Ivory Coast iyadoo M/weynaha Dalkaasi Magacaabey.
Madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa wasiirkii difaaca dowladdiisa u magacaabay, ra’iisul wasaaraha waddankaas. Ra’iisul wasaaraha cusub Hamed Bakayoko ayaa waxa uu soo dhisi doonaa Golaha cusub ee xukuumaddiisa . Mr Bakayoko ayaa waxa uu xilkaan u sii hayay si kumeel-gaar ah, kadib ra’iisul wasaarahii dalkaas Gon Caoulibaly uu si...